यो राहुलभाई राजनीति शास्त्रका बिद्यार्थी कहिलेइ थिएन। सक्रिय राजनीति कहिलेइ गरेन। राजनैतिक घट्नाक्रमलाई भने सधैं नजिकबाट नियाल्ने गर्दछ।
मलाई चिन्ने र संगत गर्ने धेरै जनालाई थाहा छ, यो राहुलभाइले माओबादीको माइबाप दरबार भित्र हुनु पर्दछ भनेर २०५३-५४ साल देखि भन्दै आएका हुन्। आज प्रचण्डको क्रान्तिकारी मुखबाट नै बुलन्द घोषणा भैसकेको छ।
त्यति बेला धेरैले गफ लगाए भने। घट्नाक्रम हरु र केही शंकास्पद ब्यक्तीहरु संग भएको कुराकानीबाट मैले त्यति बेला नै प्रचण्ड पथ भन्ने नै छैन, प्रज्ञा पथ अर्थार प्रचण्ड+ ज्ञानेन्द्र पथ मात्र छ भनेर।
अर्को कुरा नि हेर्दै जानु होला, जसले भारतको चर्को बिरोध गर्दछ, त्यति नै बढी भारतीय भत्ता बुझ्ने गर्दछ।
भारतीय खेल भन्दा चिनिया खेल अझ खतरनाक र पीडादायी हुने छ। बिस्तारै बुझ्नु हुने छ। अस्तु!।
राजाका चर्का बिरोध गर्नेहरु नै भित्र भित्र राजाबादी हुने, भारतका चर्का बिरोध गर्नेहरुले नै भारतको भत्ता खाईरहेको हुने सिद्धान्तलाइ मान्दा, माओबादीको जहिले पनि एक तमाससंग बिरोधमात्र गरेर लेखिरहनेहरु पनि भित्र भित्र माओबादीका कार्यकर्ता हुन् भनेर शंका गर्नु पर्ने हुन्छ।
कांग्रेसका नरहरि आचार्य र गगन थापाहरु पनि गिरिजाले एकचोटी आरोप लगाए जस्तै राजदरबारका भत्तावालाहरु हुन् त?
यो कुरा सही हो, माओबादी जनयुद्धले प्रजातन्त्रलाई कमजोर तुल्यायो र राजतन्त्रबादीहरुलाई मजबूत तुल्यायो, र राजाबादी र माओबादीहरु दुबैले तत्कालीन् अवस्थामा एक अर्कालाई भरपुर उपयोग पनि गरे। तर सम्पुर्ण माओबादी दरबारबाट परिचालीत भन्ने कुरो हावादारी नै हो।
फेरी माओबादीक पक्षमा केही कुरा बोल्दैमा वा लेख्दैमा "कमरेडका ठीमाह सन्तान्" हुने हो भने माओबादीका चर्का आलोचक हरु कस्को ठिमाह नि? त्यो पनि आफैंले बताई दिनु होला।आफूलाई प्रजातन्त्रका मसीहा र ब्याख्याता नै ठान्ने हरु आफूसंग असहमत बिचार आउने बित्तिक्कै कसरी "ठिमाह" शब्द प्रयोग् गरी मनोबैज्ञानिक आक्रमण पनि गर्न जान्द रहेछन्।